Nin Soomaali ah oo Afrika uga qaxay 'faquuqa ay la kulmaan ragga is guursada' - BBC News Somali
Nin Soomaali ah oo Afrika uga qaxay 'faquuqa ay la kulmaan ragga is guursada'
Lahaanshaha sawirka EX-MUSLIMS OF NORTH AMERICA
Image caption Mahad Colaad
Reerka isaga dhalay, waa qoys Muslimiin ah, balse isaga waxa uu doortay diin la'aan, iyo sidoo kale in habka noloshala uu doortay in uu noqdo dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Taasoo micnaheedu yahay in uu guursado nin kale.
Lahaanshaha sawirka MAHAD OLAD
Mahad aabihiis waxa uu ahaa macallin dhiga mandaraso lagu barto diinta Islaamka, hooyadiisna waxa ay u shaqaynaysay hay'ad aan dowli ahayn.
Waa kuu ka warhayaa in reerkiisa aysan marnaba ogolaan doonin habka uu nolosha ka doortay ee ah diin la'aanta iyo dhaqanka ragga isguursada ee uu sida cad u qirtay.
"Aniga oo ah qof dadka isku jinsiga ah ee isguursada, diin laawe ah, taas waxa ay si toos ah uga hor imaanaysaa dhaqankeyga iyo diinta aan asal ahaan heystay, mana ahan wax ay marnaba ogolaan doonaan qoyskeyga iyo qaraabadayda" ayuu yiri Mahad.